November 9, 2020 1136
श्रीमान श्रीमती’को सम्बन्धको बीचमा कुनै तेस्रो व्यक्ति’को प्रवेशले घर नै तहसनहस भएका घ’टना हरु हामी’ले धेरै देखेका छौं । विवाहेतर सम्बन्धले कैयौंका वैवा’हिक जीवन लथा’लिंग पारेको छ । तर, भारतको मध्य प्रदेशमा भने एक महिला’ले निकै अनौठो काम गरेकी छिन् ।
उनले आफ्ना श्रीमान’को विवाह उनकी गर्ल’फ्रेण्ड सँग गराइ दिइन् । मध्य प्रदेशको राज’धानी भोपालकी ती महिलाले विवाहको तीन वर्षपछि आफ्ना श्रीमानको विवाह उनकी गर्ल’फ्रेण्डसँग गराइ’दिएकी हुन् । समाचार एजेन्सी एएन’आइका अनुसार पारि’वारिक अदा’लतकी वकिल रजनी राजानीले यस’बारे जानकारी दिएकी हुन् ।
रजनीका अनु’सार केही दिन अघि उनी कहाँ एक पुरुष र एक महिला काउन्सि’लिङको लागि आएका थिए । पुरुषका अनु सार तीन वर्षअघि उनको विवाह भएको थियो र १ वर्ष अघि देखि उनको अर्की एक महिलासँग भावनात्मक लगा’व भएको छ ।
उनकी प्रेमिका ले विवाह नहुने कुराले आ’त्मह’त्या गर्ने सम्म प्रयास गरि सकेकी थिइन् । पुरुषका अनुसार त्यस पछि उन लाई आफू पनि महिला मित्र बिना बस्न नसक्ने मह’सुस भयो । उनले आफू श्रीमती सँग पनि खुसी भएको र श्रीमती सँग कुनै गुनासो नभ’एको बताउँदै यस्तो अवस्था’मा के गर्ने भनेर सल्लाह मागे’का थिए ।
वकिल रजनीले उन लाई दुई महि’ला सँग का’नुनी रुपमा बस्न सम्भव नभएको बताइन् । रजनीले ती व्यक्ति सँग आएकी उनकी महिला मित्र लाई पनि अरुको घर नबिगार्न धेरै सम्झाइन् तर उनकी महि’ला मित्रले मानिनन् ।
भोलिपल्ट रजनीले ती व्यक्तिकी श्रीमती लाई पनि बोलाइन् र काउ’न्सिलिङ गरिन् । उनकी श्रीमतीलाई श्रीमानले के चा’हन्छन् भनेर बताउँदा उनी निकै मर्मा’हत भइन् र रुन थालिन् । लामो कुराकानीपछि श्रीमती’ले एक दिनको समय मागिन् ।
भोलि पल्ट उनी श्रीमा नसँग आइन् र सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर श्रीमानसँग सम्बनधवि’च्छेद गर्ने र उनलाई स्वतन्त्र गर्ने निर्णय सुनाइन् । श्रीमानले सम्बन्ध विच्छे’दपछि श्रीमती लाई गुजारा भत्ता र आफ्नो सम्पत्ति बाट अंश दिने कुरा गरेका थिए तर उनले त्यो पनि लिन अस्वी’कार गरिन् ।
उनले सम्बन्ध:सँग आत्म’सम्मान नबेच्ने बताउँदै आफू लाई केही नचाहिने बताइन् । त्यसपछि उनले अदा’लतमा सम्बन्ध विच्छे’दको निवेदन दिएर श्रीमान’सँग सम्बन्धवि’च्छेद गरिन् । -डिसीनेपाल
Prevविद्युत प्राधिकरणको नि. कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्र देव शाक्य नियुक्त
Nextआज कुन जिल्लामा कति कोरोना संक्रमित थपिए ? हेर्नुहोस् विवरण